flash drive ​ကို format ​ချ​မ​ရ​ရင်​ဖြင့် ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ညီ​ငယ်​တစ်​ယောက် ​မေး​ထား​တာ​လေး​ပါ . ​ပြန်​ဖြေ​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် .
​ဒါ​က​တော့ ​မိ​မိ​တို့ flash drive ​များ​ကို format ​ချ​မ​ရ​တဲ့ ​အ​ခါ​မျိုး​မှာ ​အ​ခု​တင်​ပေး​တဲ့ hp usb disk storage format tool ​ကို ​သုံး​ပြီး ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​အ​သုံး​ပြု​နည်း​က​တော့ ​လွယ်​ပါ​တယ် . software ​ကို install ​လုပ်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ . ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​မိ​မိ format ​ချ​မ​ရ​တဲ့ storage device ​ရဲ့ Port ​ကို ​ရွေး​ပြီး type ​မှာ NTSC ​ကို ​ရွေး​ပြီး​တော့ start ​ကို ​နှိပ်​ပေး​လိုက်​ပါ . ​လွယ်​ပါ​တယ် . ​လို​ချင်​ရင် ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ .
(​မှတ်​ချက်။ ။pc ​တစ်​လုံး​တွင် format ​ချ​မ​ရ​ပါ​က ​တစ်​ခြား pc ​တွင် ​အ​ဆို​ပါ program ​ကို install ​လုပ်​ပြီး ​တစ်​ခြား pc ​ဖြင့် format ​ချ​ကြည့်​ပါ .)
moe July 16, 2010 at 5:36 PM
Excel ​နဲ့ database ​လုပ်​နည်း
Excel formulars & Excel functionေ ​တွ​အ​သုံး​ပြု​နည်း​စာ​အုပ်​လို​ချင်​လို့